Uwe maka ibudata
Ajụjụ mbu nke na - ebili mgbe ị na - aga ịse foto, ị ga - ahọrọ uwe kwesịrị ekwesị? Ọ bara uru iche echiche nke a tupu oge eruo. Ọbụna ma ọ bụrụ na onye na-ese foto gị bụ onye na-atụ egwu na ọ ga-eji aka nke aka ya mepụta ihe oyiyi gị, echefula na ị ga-eji uwe gị buru ibu, nke mere na mgbe ị na-eke ihe oyiyi, ị ga-ahọrọ. Taa, anyị ga-ele anya n'ụdị dị iche iche maka ịse foto. Ị nwere ike ịhọrọ onwe gị nhọrọ kacha mma.
Uwe maka oge ịse foto
Ka anyị malite, ma eleghị anya, na ịzụ ahịa azụmahịa maka foto sessions. A na-eji ejiji, dịka iwu, dị ka ndị na-emekarị ochie, na a na-ahụkarị ụdị a na foto ahụ n'ụzọ dị egwu ma dị egwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ijide foto maka ụlọ ọrụ, mgbe ahụ, ọ bara uru iji akwa akwa akwa ma ọ bụ uwe mwụda. Dị ka ọ dị mkpa, ọ dị mkpa icheta na nzukọ dum ga-anọdụ ala n'ụzọ zuru oke na gị.
Ụdị ọzọ nke ịse foto na uwe nwere ike ịbụ obere azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, maka ịgbara agbapụ na ụdị ejiji, ị nwere ike ijikọta uwe na ihe ndị, ọ ga-adị, ha ejikọtala ya, dịka ọmụmaatụ, dịka igwe mmiri ma ọ bụ sneakers.
N'okpuru, uwe elu ahụ dịka ya na ejiji ahụ ga-adịkwa mma. Ma ọ bụrụ na ị gbakwunye ya nkedo, jiri aka na-ekekọta eriri na akwa ụkwụ, mgbe ahụ onyinyo ahụ ga-adị nnọọ njọ ma na-adọrọ adọrọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ maka ejiji maka foto sessions, mgbe ahụ, isi ihe abụghị iji dochie ya na nhọrọ nke àgwà na ngwa. Achọla ụdị ejiji mara mma, nke a na-eji ejiji dị iche iche chọọ mma, na-etinye obere uwe ojii na akwa akwa heeled - na ihe oyiyi kachasị mma na foto dị mma n'ụwa.
Oge nlekọta ezinụlọ
Uwe maka ịse foto ezinyere ezinụlọ kwesịrị ịgụnye uwe ndị dị n'otu ụdị ahụ, ọkacha mma ọ dị iche na nke ọ bụla n'ime atụmatụ agba. A na-atụ aro ka ụmụaka na-eji ejiji dị mma na nke kachasị mma maka ha. Ndị nne kwesịkwara icheta na ọ dịghị mkpa na ị ga-eyi akwa uwe ma ọ bụ uwe mara mma. Uche ndị ahụ ga-ewepụ obere uche, ihe ndị ahụ ga-adọrọ mmasị karị ma na-egbuke egbuke.
Oge ịse foto oge oyi
Uwe maka ịse foto oge oyi kwesịrị ịdị na-egbuke egbuke na dị mfe dịka o kwere mee. Ihe oyiyi ahụ na-akwado ya n'ụzọ zuru oke site na ịchafụ, uwe na akpụkpọ ụkwụ, kwadoro n'otu atụmatụ ntutu. Ọchịchị isi maka eserese na oyi abụghị iji ifriizi. Ya mere, mgbanwe maka nnọkọ foto agaghị abụ naanị ọmarịcha na nke dị jụụ, kamakwa ọ ga-ekpo ọkụ.
Na mgbakwunye na ihe maka nnọkọ foto, ọ dị gị mkpa inwe obi ụtọ na obi ike. Ịmụmụ ọnụ ọchị na oghere igwefoto - na ịmụmụ ọnụ ọchị gị na foto ahụ ga-anọgide bụrụ ihe nchekwa dị ebube maka ndụ ogologo na obi ụtọ gị.
Kedu ka esi eji eriri nwanyi?
Kedu uwe na-eyi jaket khaki?
Ọchịchịrị agba aja aja agba
Kedu ka esi maa mma?
Kedu agba na ngwakọta piich?
Ejiji uwe ojii akwa
Ụdị foto foto
Uwe na ụdị 50 nke
Kedu ihe iji yikwasị uwe ogologo ọkpa?
Gastroenteritis na nkịta
Uwe mkpu uwe maka ụmụ nwanyị
Kedu otu esi eme ememe ncheta ụbọchị ọmụmụ n'oge oyi?
Vomiting nke pusi na-acha ọcha ụfụfụ
Hotels na Haifa
Psychology nke creativity
Nri "Achịcha Celery"
A na-ekpughe ihe nzuzo nke nnukwu Wall nke China: ònye n'ezie wuru ya na maka gịnị?
Ndị uweojii hụrụ na ihe ndị Kim Kardashian zuuru zuo ohi
Salad na ube oyibo na kukumba
Ememe ntụrụndụ Khvalynsk
Ntak emi mmọn̄ ọtọn̄ọde ke ndondo oro?
Ọrịa nke ikensi
Tansy - ọgwụ Njirimara